संसदको स्वास्थ्य समितिमा आज पनि गगन थापाको फरक मत माथी छलफल हुने
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्साशिक्षा विधेयकका बारेमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी आज पनि छलफल हुने भएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सोमबार १० भन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकार र डा. केसीबीचको सहमति प्रतिकूल हुने गरी आएको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने थापासहित सत्तापक्षीय ३ सांसदले सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौता र सो सम्झौताका आधारमा नेकपाकै सचेतक देव गुरुङले विधेयकमाथि हालेको संशोधन प्रस्तावअनुरूप पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।